इजिप्सियन पाउन्ड (अरबी "जीन एल-Masri" को लागि) पहिलो 1834 मा जारी गरियो। यो मुद्रा त्यतिबेला परिसंचरण मा पिरामिड को देश मा थियो जो piastres, को सम्बन्ध मा ठूलो थियो। 1885 देखि प्रथम विश्व को शुरुवात सम्म मिश्रको मुद्रा सुन मानक गर्न pegged थियो। पाउन्ड equaled बहुमूल्य धातु को 7.43 ग्राम। तर सन् 1914 देखि, पिरामिड मुद्रा को देश ब्रिटिश निर्भर भएको छ। यो किला 1962 सम्म लामो थियो। वर्ष मा, मुद्रा, भाग मा devalued जो पछि यो अमेरिकी डलर संलग्न थियो।
अंग्रेजी र अरबी - EGP दुई भाषामा हस्ताक्षर गरे। अगाडि पक्षमा तपाईं मुसलमान वास्तुकला को कुनै पनि वस्तु को तस्वीर देख्न सक्छौं। उल्टो मा, साधारण, प्राचीन स्मारक वास्तुकला रङ लगाउन। हरेक पाउन्ड एक सय piastre विभाजन गरिएको छ। तथापि, को क्रय शक्ति उत्तरार्द्ध धेरै कम छ। तसर्थ, परिसंचरण आज 25 मात्र, 50 piastres र 1 पाउन्ड मा सिक्का को। तिनीहरूलाई को पहिलो बीचमा एक प्वाल छ। एक हजार पाउन्ड थियो जो, Millimes रूपमा पहिले प्रयोग। तर आज यो एक rarity छ तपाईंले तिनीहरूलाई भेट्न असम्भाव्य छन्।
मिश्रको आराम गर्न चाहने ती लागि, तपाईं केही महत्त्वपूर्ण बुँदा विचार गर्नुपर्छ। पहिलो स्थानमा, देश, एउटै आकार मा परिसंचरण मा सबै बैंकनोट्स र अक्सर एउटै रंग हो। 20 पाउण्ड र 50 piasters: एक उदाहरण, तपाईँ यस्तो बैंकनोट्स हुन सक्छ। आफ्नो मूल्य तुलना छैन, तर तिनीहरूले संख्या लागि बाहेक, लगभग समान हेर्न। दोश्रो, सबैभन्दा पस्त, फोहोर मा इजिप्सियन पाउन्ड। यो मुद्रा अब अद्यावधिक गरिएको छ। केही इजिप्सियन पाउन्ड तिनीहरूलाई संख्या विचार गर्न को लागि यो गाह्रो छ भनेर पहना छ। यस्तो अवस्थामा अन्य यसलाई देखिन्छ कि, चाँडै सानो टुक्रा मा crumble हुनेछ। fraudsters सजिलै साना मूल्यवर्ग बैंकनोट्स पर्ची गर्न सक्छन् किनभने त्यसैले तपाईं धेरै होसियार हुनुपर्छ।
तथापि, पर्यटकहरूले इजिप्सियन पाउन्ड मात्र होइन तिर्ने छन्, तर डलरमा पनि। यी मुद्राहरू को जो खर्च गर्न, तपाईं चयन गर्नुहोस्। अर्को बिन्दु - दुवै अरब र युरोपेली तथ्याङ्कले accustomed प्रयोग बैंकनोट्स को मूल्य संकेत। किनभने shabby को एक छेउमा भने, तपाईं के मूल्यवर्ग नोट पालो बुझ्न सक्ने छैनन्। मिश्र यात्रा अघि स्पष्ट कारण जान्न को लागि अरबी अंक, यो उपयोगी हुन सक्छ। त्यहाँ मात्र 10, हो साथै युरोपेली, यो सजिलो बनाउन -0देखि 9, तर स्पष्ट उनि एकदम भिन्न छन्।
केही "moneychanger" जो deftly, मार्गदर्शन मात्र बैंकहरू मा पाउन्ड किन्न मा प्राप्त छैन। अन्तिम टिप: केहि भुक्तानी गर्न को लागि एक आवश्यकता छ, यो राम्रो प्लास्टिक कार्ड प्रयोग गर्न छैन। nalom तिर्नुपर्छ। मिश्र प्लास्टिक कार्ड संग आपराधिक ठगी संख्या पहिलो ठाउँहरू मध्ये एक हो। Fraudsters, तपाईंको आफ्नै पैसा प्रयोग इन्टरनेटबाट खरिद गर्न गोप्य जानकारी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कि तपाईं आफ्नो बैंक संग सम्बन्ध लामो व्याख्या को रूप मा एक गंभीर टाउको दुखाइ प्राप्त तथ्यलाई गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईं पिरामिड को देश मा छुट्टी मा जाने, जाँदैछन् भने राम्रो नगद लिएर घर कार्ड मा प्लास्टिक छोड्नुहोस्।
कायरो र Tahrir वर्ग मा धेरै घटनाहरू पछि, अन्य मुद्राहरू गर्न इजिप्सियन पाउन्ड विनिमय दर गिर। मुद्रा को वास्तविक मूल्य 10-20% को घोषणा नेशनल बैंक भन्दा कम हुन सक्छ। इजिप्सियन पाउन्ड बारेमा 1 Hack गर्न भन्छिन्: 5।
मुद्रा रूपमा रुबल को पद। रूबल प्रतीक: आफ्नो किबोर्ड मा एक प्रतीक
संसारको विदेशी मुद्रा भंडार। सुन र मुद्रा भंडार - के छ?
जो अमेरिकी डलरमा पनि चित्रण गरिएको छ: रोचक तथ्य
युक्रेनी मुद्रा - सबैभन्दा संसारमा सुन्दर
Chanterelle: को च्याउ, फोटो र सुकाउने लागि सुझाव को वर्णन
आफ्नो कार्यहरू लागि मानिसको जिम्मेवारी को समस्या: तर्क र तर्क
कसले सबैभन्दा लामो घाँटी हंस, जिराफ, डायनासोर, गुलाबी Flamingo छ
कसरी कैभियर घटाउने?
को "इँटा"। rockers गर्न rappers देखि
थर्मोस्टेटसँग स्नान गर्ने बाथरूम मिक्सर: सञ्चालनको सिद्धान्त, समीक्षाहरू
अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट। Filmography, जीवनी, सबै भन्दा राम्रो भूमिकाको
Rochus Misch - हिटलर मृत्यु अन्तिम साक्षी